Sondro-bidy: fantarina avy hatrany ny fiavian’ny entana … | NewsMada
Sondro-bidy: fantarina avy hatrany ny fiavian’ny entana …
Par Taratra sur 29/09/2021
“Manaraka isan’andro ny vidin’entana eny an-tsena manerana ny Nosy ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra, sy ny fanjifana” (Mica), hoy ny minisitra Razafindravahy Edgard, omaly, teo Ambohidahy. “Azo lazaina fa misy fitoniana na voatazona izany fiakaran’ny vidin’entana izany taorian’ny fifanarahana niarahana tamin’ireo mpamokatra, mpanafatra, mpamongady, sy mpivarotra antsinjarany”, hoy ihany ny minisitra. Nomeny, ohatra, itarafana izany ny vidim-bary tsy nihetsika firy eny an-tsena.
Hanohizana ny asa, hanamafy ny fitsinjovana ny isan-tokantrano ny minisitera, koa nidina nanomboka omaly eny Andravoahangy, Analakely, Besarety, Isotry …Ireo kaomiseran’ny varotra, misy 147 miaraka amin’ireo mpanara-maso ny vidin’entana (contrôleur du commerce et de la concurrence), misy 330. Eo ny talen’ny varotra anatiny sy ny sekretera jeneraly manampy azy ireo, tsy ny vidin’entana ihany, indrindra koa ny fe-potoana farany ahazoana mivarotra ilay entana. Hanampy amin’ny fanamaivanana ireo PPN hafarana nambaran’ny filohan’ny Repoblika.
Mijery sy hamantatra ny fiavian’ny entana izy ireo, koa raha misy ny sondro-bidy dia eo no ho eo ihany mandeha ny fanadihadiana hamantarana ny antony. Ohatra, mahita anio 600 Ar ny kapoakan’ny vary, rahampitso 650 Ar, fantarina avy hatrany, avy aiza, ohatrinona, iza no mpanafatra na mpamongady ? Rehefa tsy hita izay antony, nahoana no miakatra ny vidiny ? Na izany aza, raha misy antony, tokony hakarina ara-drariny ary mametra ny vidiny faran’ny ambony ny minisitera. “Hiova ny fomba fiasa hialana amin’ny endrika kolikoly”, hoy ny minisitra.